RASMI: Chelsea oo ku dhowaaqday laacibka ugu wanaagsan kooxdeeda xilli ciyaareedkan 2020-21… (Yaa ku guuleystay?) – Gool FM
Xulka Netherlands oo guul kaga daah furtay tartanka EURO 2020 kaddib markii ay ka adkaadeen Ukraine…+SAWIRRO
Karim Benzema oo ka hadlay xaaladdiisa jir ahaaneed kahor kulanka Germany
Kylian Mbappé oo ka hadlay mustaqbalkiisa kooxda Paris Saint-Germain
Xulka England oo guul uu ka gaaray dhigiisa Croatia kaga daah furtay Koobka EURO 2020… + SAWIRRO
Kooxda Juventus iyo Paulo Dybala oo weli isku qilaafsan qandaraas kordhinta Weeraryahanka
Liverpool iyo Chelsea oo ka mid ah afar kooxood ee ka dheela Premier League oo isku haysta saxiixa xiddiga reer Zambia ee Patson Daka
Kooxda Arsenal oo bilowday wadahadallo ay kula soo saxiixanayso Nabil Fekir kaddib markii lagu garaacay saxiixa Buendia
Arsenal oo u gacan haatineysa xiddig ka tirsan Manchester United
Eden Hazard oo markii ugu horreysay ka hadlay dhoola-caddeyntii hadal-heynta abuurtay ee ciyaartii Chelsea vs Real Madrid
Horudhac: Netherlands vs Ukraine… (Holland oo markii ugu horreysay tartan weyn ciyaareysa tan iyo 2014 & xiddig muhiim ah oo shaki laga gelinayo)
Ahmed Nur May 18, 2021
(London) 18 Maajo 2021. Kaddib codeyn ay Chelsea ku hordhigtay taageerayaasheeda inay doortaan xiddiga ugu wanaagsan xilli ciyaareedkan ayaa ay jamaahiirtu ku doorteen laacibka ugu wanaagsan xilli ciyaareedkan 2020-21.
Laacibka khadka dhexe ka ciyaara ee Mason Mount ayaa ku guuleystay xiddiga ugu wanaagsan Chelsea xilli ciyaareedkan gabo-gabada ah isagoo codad badan ku qaaday sida ay kooxda ka dhisan Galbeedka London ku xaqiijisay boggeeda rasmiga ah ee internet-ka.
Mount ayaa isagoo heysta abaal-marintan caawa lagu soo bandhigi doonaa Stamford Bridge kahor inta aanan la baasan kulanka ay Blues caawa la ciyaareyso naadiga Leicester City iyadoo taageerayaasha Chelsea imaan doonaan garoonka kooxdooda markii ugu horreysay tan iyo December.
Si kastaba ha ahaatee, 22-sano jirkan ayaa door cajiib ah ku lahaa shaxda iyo farsamada Frank Lampard iyo Thomas Tuchel oo xilli ciyaareedkan ku fariistay kursiga laga maamulo xiddigaha Chelsea, isagoo dhanka kale bandhig cajiib ah ka sameeyay ka qayb qaadashada weerarka kooxda maadaama uu dhaliyay sagaal gool isla markaasna uu caawiyay toddobo kale.
Bandhigga Laporta oo bilawday...(Qandaraaska Messi, mustaqbalka Koeman, saxiixyada uu u dhaqaaqayo & xiddigaha laga fasaxayo Camp Nou)